Best Review DAT Koorsooyinka
Awoodda si loo caawiyo dadka
jidh ahaan culus
Kharashka Practice ilkaha ah
Nuglaanshaha in cudurada faafa
In ilkaha waa adag a, laakiin xirfad abaal. xirfad kasta waxa uu wanaagsan iyo diidmo iyo sida xirfad kasta oo kale oo, waa in aad ka fiirsan labada marka la go'aaminayo haddii xirfado in ilkaha kugu habboon. The diidmo ah in ilkaha waxaa badanaa hadhaysay by wanaagsan si ay ardayda pre-ilkaha mararka qaarkood fikradda ah misconstrued ah waxa ay u eg tahay in ay noqon ilkaha.
Waan ogahay marka waxaan goostay in aan noqdo dhakhtarka ilkaha, wax xun kaliya ee aan maqlay oo ku saabsan ilkaha ahaa in dugsiga ilkaha waa qaali, laakiin qof mar walba ii sheegay inay awoodaan inay si dhakhso ah aan deynta bixiso waxaan noqon doonaa oo waxaa wax laga walwalo ahaa. Times ayaa kastoo beddelay tan iyo waagaas iyo kuwa ii sheegay in ma la kulmaan dhibaatada ilkaha aan jeeda ahay in waqtiga this. Tuition ayaa si wayn u kordhay iyo ilkaha waxaa ay deynta aan bixinta off sidii si fudud ama ku dhawaad ​​sida ugu dhakhsaha badan ay mar sameeyey.
Waa adag isagoo ilkaha oo waxaa jira hawlo badan oo badan oo adag in dhakhtarka ilkaha ayaa wajahaya maalmahan ka sokow deynta iska bixiyo. Haddaba waan tegi doonaa ka badan labada faa'iidada iyo khasaaraha iyo sidoo kale share macluumaad dheeraad ah ee la xiriira berrinkii ilkaha in ay isku dayaan iyo sawir oo ka fudud waxa isagoo ilkaha waxaa weeyaan inuu kaa caawiyo inaad go'aan sax ah in uu noqdo dhakhtarka ilkaha ama ma.
Ilkaha waa xirfad sare leh ixtiraamo. ilkaha A waa tirada bulshada in si weyn lagu ixtiraamo oo la aaminsan bulshada dhexdeeda taas oo uu isagu / iyadu ka shaqeeyaa. bukaanka ilkaha ku tiirsan oo ku kalsoon in ay dhakhtarka ilkaha si loo siiyo daryeel caafimaad oo fiican ee ugu macquulsan.
Ilkaha waa xirfad adeeg u janjeedha a. waqtiyada oo dhan waxaad ku qaadan doonaan caawinta dadka kale oo waa mid aad u faa'iido leh in aad sida dhakhtarka ilkaha. Waxaad samayn kartaa horumar weyn in nolosha dadka ay dib u soo celinta ay dhoola, ilkaha, isku-kalsoonaanta, is-image, iyo awoodda inay wax cunaan oo si fiican u hadlo. Waxaa jira muxibada dagdag ah loogu talagalay adiga dhakhtarka ilkaha marka aad awoodo inaad xanuunka iska yarayso ka kedisa ama meel taaj qurux badan oo kor u soo esthetics iyo shaqada ilkaha bukaanka.
Ilkaha waa xirfadiisa ciyaareed aad u deggan oo leh mid ka mid ah heerka shaqo la'aantu ugu hooseysay dalka. daryeelka caafimaadka afka ah had iyo jeer waa lagama maarmaan iyo had iyo jeer in baahida, laakiin sida xilligii Boomer ilmaha ee Fariistay ilkaha ', Faqiirka ah ee ilkaha korodhka isku qurxiyo, iyo sida dadka ku nool dheer baahida loo qabo ilkaha kaliya kordhin doonaa mustaqbalka taasoo keentay in shaqooyin badan oo la heli karo iyo xirfad aad u xasiloon.
Ilkaha bixiyaa dakhliga caafimaad mushaar dhexdhexaadka ah $146,340 in 2013 sida ay Bureau of Statistics Labor. Sida dhakhtarka ilkaha aad awoodo si ay u caawiyaan shidaal inta aad ka dhigi by inta aad shaqayso iyo model ganacsi. Haddii aad leedahay dhaqanka gaarka loo leeyahay adiga kuu gaar ah ka dibna waxaad ka shaqayn kartaa sida badan ama yar sida aad jeceshahay oo ay maamulaan aad dhaqanka si kastaba ha ahaatee aad jeceshahay oo saamayn doonaan inta badan dakhliga kaa dhigi.
xirfadiisa A ee ilkaha ku siin kara hab nololeed isku dheeli tiran u dhexeeya shaqadaada, qoyska, iyo nolosha bulshada. Haddii aad leedahay dhaqanka adiga kuu gaar ah ka dibna waxaad dooran kartaa inta aad shaqayso toddobaadkii. ilkaha intooda badan ka shaqeeyaan waqti-buuxa ah, laakiin qaar ka shaqeyn doonaan oo kaliya 3 maalmood usbuucii ama qaar ka mid ah ka shaqeyn doonaa in ka badan waqti-buuxa ah by habeenkii shaqeeya iyo xataa maalmaha fasaxa.
Ilkaha kuu ogolaanaya in aad noqon Tababaraha adiga kuu gaar ah haddii aad doorato in sidaas la sameeyo by lahaanshaha dhaqanka adiga kuu gaar ah. Waxaad ogaan kartaa sida aad rabto in aad mustaqbalkiisa ciyaareed ee ilkaha in ay. Waxaad leedahay xoriyadda sii badan oo muhiimad samayn kartaa dhammaan go'aanada daryeelka aad u yar u suurtagashay in ilkaha oo aan ahayn wax caadi ah in xirfadaha kale ee daryeelka caafimaadka.
Si ay u noqdaan ilkaha, aad ugu yaraan ku qaadan doonaan 7-8 sano oo dugsiga ka dib dugsiga sare. Waxaa shardi ma aha ee dugsi walba ilkaha in ay shahaadada Bachelor ee ay ku soo galaan dugsiga ilkaha, laakiin waxa ay heer sare waxaa lagu talinayaa oo maalmahan dugsiyada aadan caadi ahaan aqbali ardayda aan ka mid. Sidaas waxaad ku Bixisaan doonaa ugu horeysay 4 sano oo waxbarasho jaamacad ku muteystay shahaadada Bachelor ee wax kasta oo weyn oo aad doorato. Ma jiro wax weyn oo u gaar ah dugsiga ilkaha, si kastaba ha ahaatee, ardayda pre-ilkaha ugu dooran Science waaweyn a. Waxaa jira fasalo gaar ah waxaa looga baahan yahay ka hor galaya dugsiga ilkaha iyo dugsiga ilkaha kasta kala duwanaan karaan waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay ku talinaynaa, laakiin wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinka in ay qaataan inta lagu guda jiro waxbarashada undergraduate aad markaas riix halkan.
Ka dib markii qalin-ka jaamacad, waxaad ku qoraysaa dugsiga ilkaha ka dib markii ay IN, wareysanaya, iyo is aqbalay. dugsiga ilkaha waa a 4 Barnaamijka doctorate sano (3 sano haddii aad u tagto University of Pacific). Waa barnaamij aad u walaac badan oo dalbanaya. Marka qalinjabinta, waxaad heli doontaa DDS ama degree DMD aad, ku xiran yahay heerka abaalmarinta dugsiga. Waxaa jira farqi u dhaxeeya laba iyo ay labada kasbatay iyadoo shuruudaha waxbarashada isla.
dugsiga ilkaha ka dib markii aad u noqon doonaa ilkaha. Waxaad leedahay ikhtiyaarka ah ee ka socda barnaamijyada post-graduate sida a 1 sano General Practice Degenaanshaha ama Education Advanced barnaamijyada General Ilkaha inay helaan waayo-aragnimo dheeraad ah oo kor loogu qaado xirfadaha caafimaad oo sida ilkaha guud. Waxa kale oo aad dooran karaa in takhasusay mid ka mid ah beeraha ilkaha oo barnaamijyada post-graduate dhaxayn dheeraad ah 2-6 sano, ku xidhan qaas ah, ee dugsiga si ay u buuxiso.
Ka sokow qarash ugu yaraan 7-8 sano ee noloshaada dugsiga si ay u noqdaan dhakhtarka ilkaha, waxaad ku Bixisaan doonaa saacado badan samaynayaa shuqul adag iyo daal on bukaan oo dhan aad mustaqbalkiisa. ilkaha intooda badan ka shaqeeyaan waqti-buuxa ah iyo qaar ka mid ah xitaa ka shaqeyn doonaan fiidkii iyo maalmaha fasaxa. Waxa ugu fiican oo ku saabsan ilkaha waa dabacsanaanta ee jadwalka aad ku yeelan kartaa haddii aad leedahay dhaqanka adiga kuu gaar ah. Waxaad ka shaqayn kari waayeen in ka yar waqti-buuxa ah oo aan shaqayn habeenkii ama maalmaha fasaxa ah, laakiin inta badan ay sabab u tahay ilkaha deynta samayn, kharashka, iwm. Sida dhakhtarka ilkaha in kastoo, waxaad masuul ka tahay daryeelka caafimaadka afka bukaanka iyo markii bukaanka wac khadka degdegga ah ee aad la kedisa daran habeenkii Sabtida a at 9pm markaas adiga ayaa ka mas'uul iyaga u. Waa inaad siisaa hab si ay u helaan daaweyn si qorshe ku qarash badan oo waqti dheeraad ah oo ka baxsan saacadaha shaqada ee caadiga daaweynta iyo gargaaraya bukaannada iyo sidoo.
ninna ma garto waxa deyn fara badan waa ka wanaagsan tahay ilkaha. Waa ku dhowaad qosol inay maqlaan dadka maraya waxbarashada undergraduate ama barnaamijyada kale ee ka qalin caban ku saabsan deynta, maxaa yeelay, dugsiga ilkaha waa mid ka mid ah haddii aan barnaamijyada ka qalin ugu qaalisan. An ardayga ilkaha celcelis ahaan qiyaastii qalin jebiyaan doonaa $250,000 oo deyn ka dugsiga ilkaha. Dugsiyada ilkaha ugu qaalisan ee hareeraha idinka saari doonaan $500,000 oo deyn ka dul qalin iyaga ka.
Musbaar madax ballaaran on deynta qofka celcelis ee ka soo waxbarashada undergraduate, baabuur, guri, iwm. oo deynkaagii ku si deg deg ah u kacda. Haddaba haddii aad rabto in aad leedahay dhaqanka adiga kuu gaar ah aad sidoo kale ka iibsan kartaa dhaqanka ah ee hadda jira ama dhisaan adiga kuu gaar ah. Qiimaha dhaqan kala duwan, laakiin laga yaabaa in aad ku qorshayn kartaa on hoos ku xeeran $500,000 for dhaqan. Ma waxaad qaadan taag darnaataa? Waa mid aad u cusla iyo walbahaar u leedahay in deyn badan si loo hubiyo in ilkaha waa wax aad u jecel yihiin ka hor boodayaa u galay.
Badan tahay in aad hore u yar carabka ku adkeeyay ka dib markii reading dhibic in la soo dhaafay. Deynta waa qodob weyn oo stress in ilkaha. Sidoo kale waxaa jira fara badan arrimo kale sida maaraynta bukaannada iyo shaqaalaha, ganacsi, qabashada daryeelka la maareeyey, tartan la ilkaha kale ', oo aan lahayn macaashka badan oo adiga kuu gaar ah, sida markii shakhsi off, ay sabab u tahay qiimaha sarreeya ee ilaalinta dhaqanka ah.
Marka daaweynta bukaanka waxaa jira doorsoomayaal badan in ay gacan stress ah in dhakhtarka ilkaha. maalinta oo dhan waxaad ku Bixisaan shaqada iyo diiradda ku meel go'doonsan yar. shaqada aad qaban waa mid aad u daalin oo sax ah. Bukaanjiifka qaar waxay leeyihiin awood xadidan oo ay ku afkooda furo, qaar ka mid ah waxay leeyihiin afaf size ee garbasaarrada baabuur, qaar ka mid ah salivate ama dhiig sida tuubooyinka dab, qaar ka mid ah wince xanuun dhawaaqa of daloolin a, qaar ka mid ah hungaaeada hortiisa muraayad afka ah, qaar ka mid ah ku soo dhammeystay, iyo qaar ka mid ah kor u tuuri doonaa, oo aad ku.
Waxaad leedahay inuu la socdo jadwalka, taas oo ah mid aad u dhabta ah iyo sidoo kale, iyo mid ka mid ah bukaanka in ilaa muujinaysaa dabayaaqadii ama dhacdo lama filaan ah inta lagu guda jiro daawaynta keeni kartaa dib u dhac halis ah oo laalaab in aad jadwalka iyo stress la rabin badan. Waxaa jira badan oo arrimo keeni stress nolosha ilkaha. Waxaad u baahan tahay si ay u awoodaan in ay la tacaalaan oo ay ula qabsadaan heerka sare ee walaaca iyo weli u maamushid walaaca ah in aad la kulmi ka baxsan ilkaha.
Ilkaha waa mid aad u jidh ahaan culus, inkastoo dad badan oo lahaa malaha sidaas ma qabaa. Sameynta shaqada saxda ah iyo daalin meel yar oo aad gacmihiinna isagoo indhihiisu aad diiradda on aag yar iyada oo loo marayo loupes muddo dheer jira sababo sababta ilkaha waa jidh ahaan dalbanayaan. Waa adag dhabarka, gacmaha iyo garbaha. Haddii aad qabto ergonomics saboolka ah ee ilkaha waxaad dareemi doontaa oo arag natiijada in qadar gaaban. Xididdada syndrome, dhibaatooyinka joogtada ah dib, iyo dhiig-karka uu noogu badan la ilkaha. Waxaad u badan tahay inaan heli dhakhtarka dhabarku wanaagsan mar ka mid ah xirfadaada.
Sida kharashka dugsiga ilkaha waa mid aad u qaali ah, ilaalinta dhaqanka ilkaha sidoo kale waa mid aad u qaali ah. Ilkaha leedahay dakhli fiican oo ay leeyihiin xirfadaha deggan, laakiinse kama samaynta sida ugu badan ee dadka bukaanka ah ama dadka inta badan Oga. Bukaan-caban doonaa oo ku saabsan bixinta $1000 taaj qurux badan, laakiin waxay leeyihiin wax fikrad kuma jiro in dhaqanka ilkaha ugu leeyihiin dusha u dhexeeya 50-70% iyadoo wax badan oo ka dhexeeya 60-70% iyo mararka qaar xitaa ka badan 70%.
Inta badan lacagta weligii ma soo dhamaado ee meelo ka mid ah ilkaha. Waxaa tagaa si loogu bixiyo sahayda, mushaaraadka shaqaalaha, canshuurta, dayactirka, caymiska, EC jinsiyadaha, qalab cusub, iwm. qalabka ilkaha waa mid aad u qaali ah; in mishiinka axdi qarameedka guriga ilkaha kaliya loo isticmaalo in lagu samaysaa wax taaj oo aad kharash ka badan $100,000. qalab kasta oo, piece of qalab, xataa qalabka noqon karaa mid aad u qaali ah si aad u iibsato. Shirkadaha waxaa si joogto ah sii daayo qalabka cusub ilkaha, alaabtii, iyo qalabka iyo aad had iyo jeer dareemayaan cadaadis si ay u iibsadaan wax ugu danbeeyay iyo ugu weyn. Waa adag in ka hor joogo iyo ilaaliyaan dhaqanka ah oo tayo leh oo casri ah iyo sare.
Tartanka in iskuulka laga aqbalo ilkaha sii kordhaya by sanadka. Way adag tahay, oo aad u tartan rasmi ah si aad u hesho dugsiga ilkaha, sababtoo ah ardayda iyo aad u badan codsanayso sannad kasta. Ilkaha weli sida badan meesha kaliya ee daryeelka caafimaadka in aan si buuxda la wareegeen daryeelka la maareeyey. ardayda iyo aad u badan ayaa sanad kasta lagu doonaya in ay galaan ilkaha, maxaa yeelay, waxay u bixisaa xorriyad dheeraad ah iyo dabacsanaan si ay u sameeyaan waxa ay doonayaan ay mustaqbalkiisa sida dhakhtarka ilkaha. Waxaa lagaa filayaa inaad si jaamacad wanaagsan tago, leeyihiin GPA sare, iyo aad u hesho dhibcaha fiican on DAT hadda markaad codsanayso.
Marka aad tahay ka baxay dugsiga ilkaha aad u leeyihiin in ay la shaqayn jiray ilkaha dadka bukaanka ah tartamaan. Qof kasta oo doonayo in uu ku nool meelaha magaalooyinka si dhow meel walba oo waaweyn iyo nawaaxigeeda si fiican waa ka baxsan ay ilkaha fiicnayn dadka ratio. Waxaad heli doontaa si aad u hubiso in loo qoondeeyo qadar hufan oo lacag galay suuq si ay u ilaaliyaan dhaqanka ah in lagu guuleysto.
Ilkaha waa mid ka mid ah meelaha kaliya ee daryeelka caafimaadka oo aan la ishana by daryeelka la maareeyey. daryeelka la maareeyey taasoo la micno ah marka ururada sida dawladda ama shirkadda caymiska daryeelka caafimaadka loo maareeyo. Sida Obamacare iyo shirkadaha caymiska ayaa ku qariyaan nidaamka caafimaadka tani u dhici kartaa iyadoo ilkaha mustaqbalka aan si fog. Illaa iyo hadda waxaa weli jira qayb ilaa xad ah ee xoriyada maaraynta dhaqanka adiga kuu gaar ah, laakiin shirkadaha caymiska horay shidaal badan oo daaweyn ah in bukaanka aad heli doontaa iyo shirkadaha dawladeed ama caymiska ayaa laga yaabaa inuu qaato door firfircoon ka ee maaraynta daryeelka ilkaha ee mustaqbalka sida ay sameeyeen daryeel caafimaad. waxaa laga yaabaa in aadan awoodin in ay leedahay dhaqanka adiga kuu gaar ah mar dambe haddii ay taasi dhacdo.
Sida dhakhtarka ilkaha aad tahay nugul cudurrada iyo cudurrada faafa maalin walba sidii aad loogu daweeyo bukaannada. Bukaan-socodka ilaa tusi doonaa qabow ama cudur faafa oo aad noqon doonaa nugul in ay sidoo kale helitaanka. Ilkaha haysta alaabtii badan fiiqan sida shaqeeyaan: cirbadaha, garbaha neerif, deeq waxbarasho, sahamiyayaal ama scalers la magacaabo wax yar. Haddii aad si qalad ah ay leeyihiin irbad ah ama adiga laftaada ayaa loollan ku leh qalab af badan ka dibna waxaa mar walba waa halista ah ku daarashada cudurka dhiig ka dhasha sida HIV ama Hepatitis C haddii bukaanku waa side. Waxaad noqon at halista cudurrada nafta halis haddii ay taasi dhacdo. Halista dhab qandaraas cudurka uu yahay mid aad u hooseeya, laakiin waxa ay weli suurtagal tahay iyo waxa uu sidaas waxay u noqotay in ay khatar ah in a wejigooda ilkaha.
Ilkaha ma aha oo kaliya dalbanayaan jir ahaan, laakiin niyad ahaan iyo sidoo. Waxaad haysataa doonaa bukaanka show a kor ku dhawaad ​​maalin kasta oo aad u sheegto, iyagu ma ay jeclaan ilkaha. Bukaan-socodka ma aha inta badan ku faraxsan, waxay leeyihiin welwel, ama muujiyaan raaxo halka helitaanka daaweynta ilkaha. Dadka necbahay sugaya iyo haddii jadwalka uu tuuray off by bukaanka ah in kor tusay daahay ka dibna inta kale ee bukaan aad u qaadan doonaa in aad ku. Dadku ma jeclaan isagoo u xanuunsato oo ay noqon doontaa qallafsan iyo ixtiraam aad u waqtiyada. Dadka ka murugoodo daaweynta in guuldareysto ama marka ay wax qaldamaan.
Ma jiro damaanad qaaday daaweynta kaamil caafimaadka, waxaa jira nasasho doorsoomayaasha kuwa ka baxsan kontoroolka ee ilkaha ah, weli ilkaha bixin doontaa qiimaha u yeelay dareen ahaan iyo dhaqaale ahaan waqtiyada markii aanu wax ka qaldamaan. Waxyaalahan oo dhan abuuro baahida weyn dareen aad on sida bixiyaha. Sida dhakhtarka ilkaha aad rabto in aad wax u noqon kaamil ah, iyo inaad sida ugu fiican ee bukaan socodka kasta, laakiin mararka qaarkood ma waxaad samayn kartaa bukaan ku faraxsan ama waxyaabo qaar ka mid ah waa ka baxsan gacanta ku, sidaas darteed waxaa la dhaawacaysa oo u babac dhigaya in ay la tacaalaan dhacdooyinka kuwani markay dhacaan.
Ganacsi adag tahay qof, gaar ahaan ilkaha. Bal qiyaas kharashka 4 sano ee undergraduate diiradda on sayniska weyn ka dibna 4 sano ee dugsiga ilkaha diiradda on ilkaha ka dibna aad u qalin jebiyaan, waxaana la filayaa in la ogaado sida loo maamulo dhaqan ilkaha oo aan aqoon wax ka mid ah sida loo maamulo ganacsi. dugsiga ilkaha gani doonaa oo ku saabsan 1/50 waqtiga aad dugsiga ilkaha hadalka ku saabsan maaraynta dhaqanka. Ma jiraan wax aad ka heli doonaa of this oo waxay muhiimad ahaan waa in aad si aad u ogaado marka aad tahay on adiga kuu gaar ah. Way adag tahay in la sameeyo dhinaca ganacsiga ah ee dhaqanka ku, laakiin sidoo kale wada dhammaaday shuqulkii ilkaha iyo sidoo samayn. ilkaha A xirto koofiyadaha badan: uu milkiilaha ganacsiga, ganacsadaha, iyo shaqaalaha ugu weyn ee bixiya daryeelka caafimaadka ilkaha.
Waxa kale oo aad leedahay si aad u maamusho shaqaalaha. Ogaanshaha marka inuu shaqaalayaal u kireeyo iyo shaqaalaha dab, sida si ay u sii faraxsanahay dhaqaale, u siiyaan gargaarka, iyo wax ka qabashada akhlaaqda waa niyad-jab, walaac, oo dalbanaya. Waxay noqon kartaa mid aad u adag looga qabto dhammaan noocyada kala duwan ee dadka iyo shakhsiyaad markii uu isku dayay in uu qof waliba ku faraxsan yahay oo wax soo saar leh. Waxaad haysan doontaa in ay awoodaan in ay miisaamaan doorar kala duwan sida dhakhtarka ilkaha.
Ma aha mid aad u macquul ah in ay qaataan fasaxa dheer halka shaqeeya sida dhakhtarka ilkaha, maxaa yeelay, waxaad weli u leeyihiin in ay bixiso kharashka ku dhaqma aad xitaa marka aan jirin. Waxaa jira kharash maalin in ay leeyihiin in la siiyo in ama aan dhaqanka waa xitaa furan, sidaa darteed waqtiga iska ma aha oo kaliya in aad ka hortagtaa ka lacag samaynta, laakiin waxa ay sidoo kale kharash aad lacag taas oo ka dhigaysa in aad fasax ka badan ayaa qaali ah. ilkaha Inta badan ma qaadan karo wax ka badan laba toddobaad off oo isku xigta oo aan la shaqeeyo oo xitaa in ay noqon kartaa mid aad u qaali ah.
Aadan helin gargaarka loogu talagalay ka shaqeeye. The benefits oo kaliya oo aad ka heli jira faa'iidooyin ah in aad naftaada ku siin. Haddii aadan maal iyo caqli badbaadin sanadihii la soo dhaafay, aad laga yaabo inuu ka shaqeeyo wax badan ka dheer aad rabto lahaa oo kaliya in ay leeyihiin wax ay ka fariisto on.
Waxaa jira xaqiiqooyin kala duwan random ah oo ku saabsan ilkaha oo halkan waxaa tusaale u ah kuwa wanaagsan iyo kuwa xun xidhiidh la leh.
top 10 Careers: Dhakhtarka ilkaha waxaa si joogto ah kaalinta sida mid ka mid ah hogaanka 10 xirfadaha ee dalka ay sabab u tahay dakhliga raaxo, heerka shaqo la'aanta hooseeyo, iyo dheelitirka wanaagsan shaqada nolosha.
ismiidaamin ah: tiro ma sidaas u weyn oo ku saabsan ilkaha waa in ilkaha si joogto ah ay leeyihiin mid ka mid ah heerka ugu sareeya ee ismiidaamin ka mid ah xirfad kasta. Ilkaha ka yar tahay tiro xad dhaaf ah stress ka shaqeeya saacado badan, cabashooyinka ka yimi bukaanjiifka, iyo deynta. Cilmi ayaa soo jeediyay in: stress, dalabaadka jirka iyo shucuurta, cabashooyinka bukaan, wanaagsanaanta, deyn, fududeeyo helitaanka daawooyinka kala duwan, iyo heerka sare ee cudurka dhimirka ay sabab u tahay stress jira oo dhan saameeye oo si yeelaan heerka sare ismiidaamin ah ka mid ah ilkaha.
ilkaha A waa xirfadle daryeel caafimaad in ay leedahay magaca dhakhtar, Doctor of Qalliinka Ilkaha (DDS) ama Doctor of Medicine Ilkaha (DMD) – labada darajo macnaheedu wax la mid ah oo ay kasbadeen by waxbarasho la mid ah. Waa ilaa dugsiga ilkaha si ay u go'aamiyaan degree waxay abaalmarinta ee dugsiga.
Ka dib markii dugsiga ilkaha, ilkaha cusub ayaa fursado badan uu ka soo xusho. Waxay sii wadi karaan waxbarasho iyo eryan barnaamijka post-doctorate ah ama deganaanshaha tababar sare ee ilkaha guud ama mid ka mid ah 9 taqasusyo ilkaha. Meelaha qaaska ah ee ilkaha waa: Oral & Maxillofacial Qalliinka, Oral & Maxillofacial raajada, Oral & Pathology Maxillofacial, orthodontics & Dentofacial lafaha, Endodontics, Periodontics, Prosthodontics, Ilkaha Carruurta, iyo Caafimaadka Dadweynaha Ilkaha. Barnaamijyadan waxay iyo dad ardayda u dhaxayn dheeraad ah 1-6 sano oo tababar sare ka dib dugsiga ilkaha.
Haddii dhakhtarka ilkaha ma rabo in la sameeyo wax tababar ah oo horumarsan Markaasay bilaabi shaqayn kartaa sida ilkaha guud ee noocyo kala duwan oo meelo kala duwan. meelaha waxaa ka mid ah: aqoonyahano, cilmi, ciidamada, caafimaadka dadweynaha, ilkaha shirkadaha, dhaqanka gaarka loo leeyahay, group dhaqanka, daryeelka caafimaadka ee caalamiga ah, ama daryeelka isbitaalka. Waxaa jira fursado badan oo la kala dooranayo oo aad go'aan ka gaari kara waddada adiga kuu gaar ah ee ilkaha iyo nooca bukaanka ama meesha aad rabto in lagu daweeyo iyo ka shaqeeyaan.
Ilkaha waa xirfad weyn oo ka mid ah oo aad u faa'iido iyo sidoo. Waan ogahay inaan si xoogan u miisaamay ku diidmo ee xirfadda, laakiin in my opinion wanaagsan u bi'isaa diidmo ah. Waxaa muhiim ah in kastoo, sida doorasho kasta oo mustaqbalkiisa, si ay u fahmaan shaqada iyo waxa weeyaan si aad u hubiso in aad waxa ka go'an in ay ka dhigi iyo, Sidaa darteed, ka go'an in ay bukaanada sida aad adigu masuul ka daryeelkooda iyo fayo-qabka. Waa masuuliyada weyn u leedahay iyo in kastoo waxay noqon kartaa mid aad u cusla waqtiyo ay tahay Sharaf ayay inoo iyo abaalmarin si ay u bixiyaan daryeel tayo leh in si wayn ka bedeli kartaa nolosha wanaagsan.
Haddii aad diyaar u yihiin in ay bilaabaan isku diyaarinaya imtixaanka DAT ah, hubi aan guide on sida ugu wanaagsan ee loogu diyaariyo. Waxa kale oo aad u baahan si aad u hubiso soo baxay ugu wanaagsan ee qalabka waxbarasho DAT si loo hubiyo in aad diyaar u badan ee suurtogalka ah.
Sidoo kale, halkan waa qaar ka mid ah links ka ururka dhakhaatiirta American ah (ADA) iyo sidoo kale Student Association Ilkaha Maraykanka (Asda) in ku siin doonaa aragti dheeraad ah iyo macluumaad la xiriira mustaqbalkiisa ah in ilkaha.
Maxaa xirfad ah ee aad ka bixin karto Ilkaha? – ADA
Careers in Mihnadda ilkaha – ADA
Life ee ilkaha ah – Asda